मधेसको रियालिटी : यस्तो देखियो मधेस आन्दोलनको केन्द्र भारदहको ‘मुड’ - Ratopati
भदौ–६ | एसके यादव
सप्तरी भारदहका किराना व्यवसायी विनोदकुमार पाँच महिनादेखि कतारमा काम गरिरहेका छन् । उनको आफ्नै चल्तीको किराना पसल हुँदाहुँदै कतार गएर किन कडा परिश्रम गर्नुपरेको छ त ? कारण हो– मधेस आन्दोलन ।
भदौ १ देखि भारदहबाट उठेको मधेस आन्दोलनले गर्दा विनोदकुमारजस्ता थुप्रै व्यापारी छन्, जो ऋणको भार थेग्न नसकी कोही विदेश पलायन भएका छन् त कोही व्यापार छाडेर घर बसेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै पर्ने भारदह बजार मधेस आन्दोलनताका ६ महिनासम्म पूरै बन्द रह्यो । मधेस आन्दोलनकै उद्गमस्थल रहेको भारदह आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु थियो । राजमार्ग ठप्प पार्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ भारदह भएकाले राजविराजको सम्पूर्ण आन्दोलन त्यहीँ केन्द्रित हुन्थ्यो । र, त्यहाँ दिनहुँजस्तो प्रहरीसँग झडप हुन्थ्यो ।
आन्दोलनको सुरुकै दिन अर्थात् भदौ १ गते प्रहरीको गोलीबाट राजीव राउतको निधन भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यहाँ राउतजस्तै भदौ ५ गते वीरेन्द्र राम र भदौ २३ गते रामकृष्ण राउतको पनि प्रहरीको गोलीबाट निधन भएको थियो । मधेस आन्दोलनक्रममा सप्तरीमा सातजनाको निधन भएको हो, जसमध्ये तीनजनाको भारदह घटनामा भयो । मधेस आन्दोलनमै सबैभन्दा कडा आन्दोलन हुने ठाउँ नै भारदह थियो, जहाँ दिनदिनै झडप हुनुको साथै तीनजनाको मृत्यु र दर्जनौँ आन्दोलनकारी घाइते भएको राजविराजका पत्रकार श्यामसुन्दर यादवले बताए ।
भारदह बजार पूर्ण रुपले खुले पनि त्यहाँका जनतामा त्रास कायम रहेको भारदह व्यापार संघ अध्यक्ष कुन्दन मण्डलले बताए । ‘जब–जब मधेसवादी दलका नेताहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिन्छन्, त्यसबेला भारदहका स्थानीय त्रसित हुन्छन् । उनीहरुले कामना गर्छन् कि अब पुनः उस्तै आन्दोलन गर्न नपरोस् ।’ संघ अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘कतिपय व्यापारीको मोटरसाइकल फुटायो भने कतिपयको साइकल टुटायो । अझै ती साइकल र मोटरसाइकल बनेको छैन । त्यो बेलाको प्रहरीको ज्यादती भनिसाध्य छैन ।’
प्रहरीले चलाएको गोलीले कतिपयको झ्यालको सिसा फुटेको अझै बनेको छैन । भित्तामा गोली लागेको दाग अझै देखिन्छ । संघका अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘स–साना बालबालिकाले अहिले पनि प्रहरीलाई देख्दा तर्सिन्छन् । यद्यपि प्रहरीबाट अहिले कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार भएको छैन । स्थानीयसँग प्रहरीले अहिले राम्रो व्यवहार गरिरहेका छन् ।’
अध्यक्ष मण्डलका अनुसार, भारदहवासी कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधि नहोस् भन्ने चाहेको सुनाए । ‘भारदहमा कुनै प्रकारको भीडभाड भयो भने स्थानीय त्रसित हुन्छन् किनभने त्यहाँका जनताले गोली चलेको, मान्छे मरेको, घाइते छटपटिएको दृश्य प्रत्यक्ष देखेका छन्, भोगेका छन् । त्यही भएर उनीहरु चाहन्छन् कि सकभर भीडभाड हुने, कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधि नहोस्,’ उनले भने ।
भदौ १ गते सहिदको सम्झनामा मधेसी मोर्चाले स्मृतिसभा कार्यक्रम गरेको थियो । सोही दिन उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि त्यहीँ छुट्टै स्मृतिसभा गर्ने तयारी गरेको थियो तर त्यहाँका स्थानीयले रोक लगाए । सप्तरीमा मधेसी मोर्चाबाट अलग भएका फोरम नेपालले त्यही दिन छुट्टै कार्यक्रम गरेको भए मधेसी मोर्चा र फोरम नेपालका कार्यकर्ताबीच झडप हुने सक्ने सम्भावना देखेर स्थानीय व्यापारी तथा जनताले कार्यक्रममा रोक लगाए ।
‘एक त यहाँ कुनै प्रकारको राजनीतिक कार्यक्रम नै नगर्नुस्, यदि कार्यक्रम गर्नु छ भने एकैठाउँमा गर्नुस् । नभए एकै दिन छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम नगर्नुस्,’ मण्डललगायतका व्यापारीले दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । र, सोही आग्रहका कारण मधेसी मोर्चाले भदौ १ गते र फोरम नेपालले भदौ ५ गते कार्यक्रम गरेका थिए । छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम भए पनि कुनै प्रकारको झडप नहोस् भनी जनतामा भय कायमै थियो ।
भारदह बजारमा भेट भएका पत्रकार जितेन्द्र खड्काका धारणा अलि फरक छ । उनले भने, ‘स्थानीय सबै त्रसित छैनन्, जो काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा लागेको, आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएकामात्र त्रसित देखिएका छन् । भारदहका जनता अझै आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमै छन् ।’ यद्यपि आन्दोलनक्रममा मृत्यु भएका, घाइते भएकाले आन्दोलनकारी र राज्यबाट पाएका आश्वासन नपाउँदा थोरै नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले आन्दोलनमा केही निरूत्साहित हुने सक्ने पत्रकार खड्काले बताए ।
भारदहका स्थानीय नेता एवम् नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारीले पनि भारदहको अवस्था हेरेर चिन्तित छन् । छोराको उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा रहेका तिवारीसँग भेटेर कुरा गर्दा उनले भारदहका आन्दोलनकारी निराश र उदास रहेको बताए ।
‘जहाँ आन्दोलन गर्दा कुनै सभामा २५ हजारभन्दा बढी जनताको सहभागिता हुन्थ्यो तर आज त्यही स्मृतिसभा गर्दा पाँच सयजना पनि सहभागी हुँदैनन् । यस्तो किन भयो ? आफैँ बुझ्ने कुरा हो,’ तिवारीले भने, ‘मधेसवादी दलका नेताले भारदहवासीसँग थुप्रै वाचा गरे तर अहिलेसम्म कुनै पूरा गरेको छैन । भारदहवासी अझै आन्दोलन गर्न तयारीमा छन् तर यही अवस्थामा होइन । राज्यले त ठगेकै छ, मधेसवादी दलले पनि पटक–पटक धोका दिएका कारण भारदह उदास छ ।’
अध्यक्ष तिवारी आन्दोलन अवधिभरि कहिल्यै भारदह छाडेका थिएनन् । सधैँ भारदहमै बसेर राजमार्ग अवरोध गर्न सहभागी थिए ।
मधेस आन्दोलनका कारण ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म बन्द रहेको भारदह बजारका कारण स्थानीय प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । आन्दोलनक्रममा कतिपय स–साना उद्योग बन्द नै भए । बाँकी ऋणको भारी बोके ।
व्यापारीलाई पाँचदेखि ५० लाखसम्मको ऋण लागेको छ । र, ऋण लागेको कारण सामान महँगोमा बेचिरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आमउपभोक्ता परेका छन् । एक किराना व्यापारीले भने, महँगोमा समान बेचिएन भने ऋण कसरी चुक्ता गर्ने, आन्दोलनकारीले ऋण मिनाहा गराइदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् तर दिनदिनै त्यसको ब्याज बढ्दै गए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ऋण चुक्ता गराउनु कता हो कता ब्याज पनि मिनाहा गराइदिए ठूलै राहत हुन्थ्यो तर न राज्यबाट त्यसको कुनै पहल भएको छ न आन्दोलनकारीबाट । त्यही भएर महँगोमा समान बेचेर पनि ऋण लागेको रकम उठाउने प्रयासमा छौँ ।’
यद्यपि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनक्रममा व्यापारीलाई लागेको ऋण मिनाहा गराउने सहमति भएको फोरम नेपाल केन्द्रीय सदस्य एवम् राजविराजका स्थानीय नेता शैलेन्द्र साहले बताए । आन्दोलनक्रममा लागेको ऋण मिनाहा गराउने प्रयास जारी रहेको बताउँदै उनले ऋण मिनाहा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
राजविराजका कपडा व्यापारी थानसिंह बन्सालीले भने, ‘आन्दोलनकारीले ब्याज मिनाहा गराउन सरकारलाई प्रेसर गरिरहेका छन् । सरकारले समेत आश्वासन दिएको छ ।’
मधेश आन्दोलनको उद्गमस्थल भारदहमा पनि देखियो राजेन्द्र र उपेन्द्रको द्वन्द्व
गत वर्ष मधेस आन्दोलन हिंसा, तनाव र नाकाबन्दी भइरहँदा रातोपाटी टिम मधेस झरेको थियो । गत मंसिरमा त्यहाँबाट गरिएका रिर्पोटिङ सामाग्री यस्ता छन् जसले आजको मधेसको मुड बुझ्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
रातोपाटी टिमले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङ
प्रहरी र आन्दोलनकारीकै अगाडि वीरगन्ज नाकामा यसरी लाग्छ पेट्रोलको हाटबजार Ground Zero बाट DNN को स्टोरी
[email protected] Zero : ठप्प छ देशको एक मात्र सुख्खा बन्दरगाह (फोटोफिचर)
नाकाबन्दीको असर : मासिँदै छन् जंगल (फोटोफिचर)
के सोच्दैछन् मधेसमा बस्ने पहाडिया ? Ground Zero बाट DNN को विशेष रिपोर्ट
फरक दृश्य : मधेस आन्दोलनको समर्थनमा विद्यार्थीले बनाए वीरगंजमा मानव साङ्ग्लो (फोटोफिचर)
[email protected] Zero : मधेशमा थप हिंसाको खतरा : यसरी युवा दस्ता तयार गर्दैछन् मधेशी दल ?
[email protected] Zero : प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी जनताको प्रश्न : हामी कसरी भारतीय गुण्डा भयौं ?
[email protected] Zero : मधेशमा थप हिंसाको खतरा : ‘छापामार शैली’ मा राजमार्ग कब्जा गर्ने मोर्चाको तयारी
सर्लाहीको जंगलमा हेर्दाहेर्दै मोर्चाका कार्यकर्ताले यसरी जलाए गाडी (फोटो/भिडियो)
[email protected] Zero : मधेशका श्रमिक भन्छन् : बाँच्नै गाह्रो भो
[email protected] Zero : मध्यरात ब्युँझने मधेसको राजमार्ग : कसैलाई गोलीको डर, कसैलाई गुलेलीको !
[email protected] Zero : मधेसका सरकारी कार्यालय : कतै कालो झन्डा, कतै बन्दुक दर्ताको सूचना